DeltaFosB အတွက်နျူကလိယတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခန်းကဏ္morမှာမော်ဖင်းအကိုက်လုပ်ခြင်း (2006) - Your Brain On Porn
နတ် neuroscience ။ 2006 ဖေဖော်ဝါရီ;9(2): 205-11 ။ EPub 2006 ဇန်နဝါရီ 15 ။
Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, Kelz ကို MB, Shaw-Lutchman T က, Berton အို, sim-Selley LJ, Dileone RJ, Kumar ကတစ်, Nestler EJ.
အခြေခံပညာအာရုံကြောသိပ္ပံတက္ကဆက်ပြည်နယ်အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှတက္ကသိုလ် 5323 ဟယ်ရီ Hines က Boulevard, Texas ပြည်နယ် Dallas 75390-9070, အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Center ကဦးစီးဌာန။
အဆိုပါကူးယူအချက် DeltaFosB အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) နှင့် dorsal striatum အတွက်သွေးဆောင်သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ opiates မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက် NAc အတွက် DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့ inducibly အဆိုပါ NAc နှင့် dorsal striatum နှင့်အထူး NAc အတွက်ပရိုတိန်းဖော်ပြဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်း အသုံးပြု. ပရိုတိန်းဖော်ပြတဲ့ bitransgenic mouse ကိုလိုင်း အသုံးပြု. DeltaFosB ၏ overexpression အောင်မြင်။
အဆိုပါ NAc အတွက် DeltaFosB overexpression မော်ဖင်းအကိုက်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုဖို့ကြွက်များ၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် exacerbated ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုဖို့ဦးဆောင်, ဒါပေမယ့်လည်းမော်ဖင်းအကိုက်၏ analgesic သက်ရောက်မှု၎င်းတို့၏ sensitivity ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် analgesic သည်းခံစိတ်၏ပိုမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ opioid peptide dynorphin DeltaFosB ဒီအမူအကျင့် phenotype ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မှတဆင့်တဦးတည်းပစ်မှတ်ဖြစ်သလိုပဲ။
Together ဤစမ်းသပ်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း dynorphin စကားရပ်များ၏ဖိနှိပ်မှုကနေတဆင့် NAc အတွက် DeltaFosB, opiate စွဲအတော်ကြာအဓိက features တွေ mediates ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။